Ulo Nkwado nke nkwonkwo ụkwụ - China Ndị na - eme Nkwado na nkwonkwo ụkwụ
O jiri neoprene, na-agbanwe agbanwe, na-adịgide adịgide ma na-eku ume ma nwee njirika-ịchacha ngwa ngwa. Yabụ na ị nwere ike yikwasị ụkwụ nkwonkwo ụkwụ dị mma iji hie ụbọchị. Ihe omimi 360 gburugburu nkwonkwo ụkwụ, nkwụsi ike, nkwado siri ike. nkwado nkwonkwo ụkwụ nwere mgbakwunye akụkụ na-eme ka ọ dị ike na njiri mara aka na -ebelata ngwa ngwa na nrụgide na nkwonkwo ụkwụ.
Nkwado nkwonkwo ụkwụ abụọ
Nkọwapụta: Ihe nke Neo Loose Size S, M, L, XL Agba arụ ọrụ ụcha agba Chekwaa nkwonkwo ụkwụ, mee ka ọ dị mma ma bụrụ nke dị mma kwadoo nkwonkwo ụkwụ 3.Ọ dị mma iji eyi 4.Ezigharị ihe agaghị emetụ mmegharị gị 5.Ọfụfụ dị mma nwere ike ime ka nkwonkwo ụkwụ gị kpuchie 6.Ọ na-enye nkasi obi, mgbanwe dị elu na ike maka ịdị kwa ụbọchị ...